.“သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ရယ်ဖွယ်ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို ချပြကာ ဆေးထိုးခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်”. – Thukhuma
.“သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ရယ်ဖွယ်ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို ချပြကာ ဆေးထိုးခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်”.
Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးေရ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေက်ာ္ေက်ာ္ကိုေတာ့ အထူးအေထြ မိတ္ဆက္ေပးစရာမလိုေအာင္ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ ေက်ာ္ေက်ာ္ကေတာ့ က်ရာဇာတ္႐ုပ္တိုင္းကို ပီျပင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းတစ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
ေက်ာ္ေက်ာ္နဲ႕ အတူ တြဲလ်က္အေနနဲ႕ သူငယ္ခ်င္းေတြျဖစ္တဲ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ေတြျဖစ္တဲ့ ဆုျမတ္ႏိုးဦးနဲ႕ ညီထြဋ္ေခါင္တို႕ကိုလည္း ရင္းႏွီးၿပီးသားျဖစ္မယ္ ထင္ပါတယ္.။ တစ္ေယာက္နဲ႕ တစ္ေယာက္ သူငယ္ခ်င္းအရင္းေတြမို႕ ေဆးထိုးကာ စေနာက္ၾကမ္းၾကသူေတြလို႕ ဆိုရင္မွားမယ္ မထင္ပါဘူးေနာ္.။
ဒီေန႕မွာလည္း ေက်ာ္ေက်ာ္က သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ဆုျမတ္ႏိုးဦးရဲ႕ Snap ပံုေလး တစ္ပံုကို သူ႕ရဲ႕ My Day မွာ တင္လာခဲ့ပါတယ္။. ကားေပၚမွာပဲ အားရပါးရ ထိုင္ကာ စားေသာက္ဖို႕ ျပင္ဆင္ေနသူ ဆုျမတ္ႏိုးဦးေလးရဲ႕ ပံုရိပ္ေလးကို တင္လာခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.။
သူငယ္ခ်င္းအရင္းေတြမို႕ ပိုလို႕ေတာင္ ေဆးထိုးၾကမ္းကာ စေနာက္တတ္ၾကတဲ့ ေက်ာ္ေက်ာ္၊ ဆုျမတ္ႏိုးဦးနဲ႕ ညီထြဋ္ေခါင္တို႕ကို အားေပးခ်စ္ခင္ရင္ မွတ္ခ်က္ေလပးေတြ ေရးခဲ့ပါဦးေနာ္.။ ဖတ္ရႈ႕ေပးခဲ့ၾကတဲ့ Cele Active World ပရိသတ္ႀကီးလည္း ေပ်ာ္ရႊင္သာယာတဲ့ ေန႕ေလးတစ္ေန႕ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိ္ုင္ၾကပါေစလို႕ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္.။
“သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ ရယ်ဖွယ်ပုံရိပ်လေးတစ်ခုကို ချပြကာ ဆေးထိုးခဲ့တဲ့ ကျော်ကျော်”
Cele Active World ပရိသတ်ကြီးရေ သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ ကျော်ကျော်ကတော့ ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို ပီပြင်အောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ သရုပ်ဆောင်ကောင်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
ကျော်ကျော်နဲ့ အတူ တွဲလျက်အနေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေဖြစ်တဲ့ သရုပ်ဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ဆုမြတ်နိုးဦးနဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်တို့ကိုလည်း ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် သူငယ်ချင်းအရင်းတွေမို့ ဆေးထိုးကာ စနောက်ကြမ်းကြသူတွေလို့ ဆိုရင်မှားမယ် မထင်ပါဘူးနော်.။
ဒီနေ့မှာလည်း ကျော်ကျော်က သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ဆုမြတ်နိုးဦးရဲ့ Snap ပုံလေး တစ်ပုံကို သူ့ရဲ့ My Day မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်။. ကားပေါ်မှာပဲ အားရပါးရ ထိုင်ကာ စားသောက်ဖို့ ပြင်ဆင်နေသူ ဆုမြတ်နိုးဦးလေးရဲ့ ပုံရိပ်လေးကို တင်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။
သူငယ်ချင်းအရင်းတွေမို့ ပိုလို့တောင် ဆေးထိုးကြမ်းကာ စနောက်တတ်ကြတဲ့ ကျော်ကျော်၊ ဆုမြတ်နိုးဦးနဲ့ ညီထွဋ်ခေါင်တို့ကို အားပေးချစ်ခင်ရင် မှတ်ချက်လေပးတွေ ရေးခဲ့ပါဦးနော်.။ ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ Cele Active World ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်.။
.မွေးရာပါရင်ကြပ်ရောဂါကြောင့် ဆရာဝန်တွေလက်လျော့ထားရတဲ့ ဂေဟာက ပထမဦးဆုံးသားလေး ခိုင်ဦးမောင်ရဲ့ လက်ရှိပုံရိပ်ကို ပြသလာတဲ့ ခိုင်နှင်းဝေ.